::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather म व्याक हुन तयार छु, तर फोरमबाट एउटै प्यानल आउछ : प्रज्ञान न्यौपाने:: Rojgar Manch ::
म व्याक हुन तयार छु, तर फोरमबाट एउटै प्यानल आउछ : प्रज्ञान न्यौपाने
शुक्रवार, २०७४ बैशाख १४ गते ००:४८
प्रज्ञान न्यौपाने, निवर्तमान अध्यक्ष
आगामी असर दोश्रो साता हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनलाई लिएर व्यवसायीहरु बीच कोठे बैठक सुरुहुन थालीसक्यो । संघको विधानले अध्यक्षमा उठ्न एक कार्यकाल पदाधिकारी भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै अग्रज व्यवसायी अध्यक्षमा लडन बञ्चित भएका छन् तिनै मध्येका एक हुन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने । अध्यक्षको दावेदारी गर्न संघको विधानले रोकेपनि अध्यक्षमा लड्न धेरै ढोकाहरु खुल्ला रहेको भन्छन न्यौपाने । संघको आसन्न निर्वाचन तथा संघका गतिविधीलाई लिएर उनै न्यौपानेसँग रोजगारमञ्च डटकमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन आउन अझै २ महिना बाँकी छ । तर चुनावलाई लिएर लोकतान्त्रिक फोरम भित्र धेरै आकांक्षी देखिए भन्ने कुरा बाहिर आइएरहेकोछ वास्तविकता यस्तै हो ?
संघको निर्वाचनमा आकांक्षी देखिनु नौलो कुरा भएन । झन् हाम्रो त लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले सबैले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न पाउछन् । तर लोतान्त्रिक फोरमले अन्तिममा प्रजातान्त्रिक पद्दति बाट संस्थागत उम्मेदवार खडा गर्छ । विगतमा धेरै पटक संघको निर्वाचनमा फोरमका तर्फबाट दुइटा प्यानल उठिराखेको अवस्था थियो । तर यो पल्ट दुइटा प्यानल हुँदैन एउटा प्यानल हुन्छ । त्यो एउटा प्यानल बनाउन मेरो ठुलो कसरत पनि रहन्छ र म आफु पछि हटेर भए पनि त्यो एउटा प्यानल बनाउन लाग्छु ।
तर संघको विधान संशोधनले त सबै अग्रज व्यवसायीलाई अध्यक्ष बन्न बन्देज लगाइदियो नि ?
यो विषयमा मैले खासै त्यति महत्व दिएको छैन । किन भने संशोधनेको निर्णय यो भन्दा अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको निर्णय हो र सम्पूर्ण व्यवसायी चुनावको प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएको बेलामा यो संशोधन गरिएको थियो । तर यो संशोधन गराउनु पर्ने पनि खासै थिएन । हुन त यो संशोधन गरे पछि आफुलाई अध्यक्ष बन्न सजिलो हुन्छ भनेर गरिएको जस्तो अहिले मलाई लागि रहेको छ । यो कुरा सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराएर दुइ तिहाई बाट संशोधन गर्न सकिन्छ । तर चुनाव आउन धेरै लामो समय छैन किन यो विषयमा विवाद गर्नु भनेर हामीले विवाद नगरेको पनि हो । यदि अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर अहिलेको कार्यसमितिले भन्छ भने विगतका कार्यसमितिले गरेका सबै निर्णय ठिक छ भनेर भन्न सक्नुप¥यो । हिजो हंशराजजीले व्यवसायी हित बिपरित काम गर्दै हिड्न थाले पछि हामीले उहालाई बिचैमा हटाउनु पर्यो । यो संशोधन पनि हंशराज जी कै कार्यकालमा त गरिएको हो नि । यदि यो संशोधनलाई अहिलेको कार्यसमितिले सहि छ भनेर काध थाप्छ भने त वर्तमान कार्यसमितिको लाचारीपन हो । ठिक छ हिजो जे भयो भयो भन्ने हो भने अब आगामी दिनका लागि बाटाहरु पनि त खोलिदिनु पर्यो नि त्यसका लागि कसैलाई राजीनामा गराएर ल्याउने होकी के गर्ने हो त्यो त अहिलेको कार्यसमितिले गर्दिनुपर्छ । सबैका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । त्यसपछि प्रगतिशील मञ्चले पनि संस्थागत निर्णय गर्ला फोरमले पनि गर्छ । त्यसैले पहिलो कुरो अहिले देखिएका बाधाहरु वर्तमान कार्यसमितिले फुकाई दिनु पर्छ । साना–साना कुरामा लडाई,झगडा गरेर भेला बोलाउने,विशेष साधारण सभा बोलाउनु उचित हुदैन । बिमलजीले म तपाईहरुको कुरामा सकारत्मक छु समय परिस्थिति हेरेर केही निर्णय गर्छु भन्नु भएको छ हेरुम अब चुनाव पनि लागिसक्यो भन्दा हुन्छ । मलाई लाग्छ २÷४ दिनमै अध्यक्षज्यूले केही निर्णय लिनु हुन्छ ।
त्यो संशोधनले त तपाईलाई पनि अध्यक्षमा उठ्न रोक्यो । त्यहि भएर संशोधन हुनु पर्छ या पदाधिकारीमा मनोनित गरिनु पर्छ भन्नुभएको हो ?
लोकतान्त्रिक फोरमको अध्यक्ष भइसकेको नाताले मत स्वत अध्यक्षको आकांक्षी हु नि । व्यवसायीको हितको लागि प्रज्ञान न्यौपाने आफ्नो व्यवसाय छोडेर लाग्छ र व्यवसायीको अहितमा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने सबै व्यवसायीलाई थाहा छ त्यसैले पनि म अध्यक्षको प्रत्याशी हुनु कुनै नौलो कुरै होइन । तर, अध्यक्षमा उठ्ने विषयमा व्यवसायीहरुसँग, लोकतान्त्रिक फोरमको कार्यसमितिसँग सर–सल्लाह गर्छु । यदि उहाँहरुले ठिक छ तपाई अघि बढ्नुपर्छ भन्नु भयो भने निश्चित रुपमा म अध्यक्षमा उठ्छु । होइन, प्रज्ञानजी तपाई अहिले अघि नबढ्नुस सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्नुभयो भने म व्याक हुन पनि तयार छु । म पदको आकांक्षी पनि होइन, मलाई लोभ पनि छैन तर फोरमबाट दुईवटा प्यानल हुन कुनै हालतमा म दिन्न । चाहे त्यो मेरो नाममा सर्वसम्मत होस् या अरु कसैको नाममा । एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस कि म आफु ब्याक सर्न तयार छु तर लोकतान्त्रिक फोरमबाट यसपाली एउटै मात्र प्यानल चुनावमा उत्रन्छ ।
भने पछि व्यवसायीहरु फुट्दा आफैलाई घाटा हुँदो रहेछ भन्ने महसुस तपाईहरुलाई भयो ?
निश्चित हो । व्यवसायीहरु फुट्दा अझ त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक फोरममा आस्था राख्ने व्यवसायीहरु टुक्रिदा फोरमलाई नै घाटा हुन्छ भन्ने हामीले विगतमा नै महसुस गरेको हो । हिजो हंशराजजी एक मतले हार्नु पर्दैन थियो होला । त्यसपछि किरणजीको पालो आउथ्यो, बिमलजीको पालो आउथ्यो म नै पनि अध्यक्ष भइसक्थे होला या मेरो पालो आउथ्यो होला । घर फुटे गवार लुटे भन्ने त उखान नै छ नि हामी भित्रकै अन्तर कलहले हामी पछि प¥यौ २ वर्ष ग्याप भयो । अहिलेको कार्यसमितिमा पनि फोरमको पुरै प्यानल विजयी हुन सकेन, त्यसले गर्दा बिमलजीलाई काम गर्न कति सजिलो भयो कति अफ्m्ठ्यारो भयो त्यो उहाँले महसुस गर्नु भएको होला ।
तर विगत केही वर्ष यता संघको कार्यसमितिले व्यवसाय र व्यवसायीको हितमा काम गरेको देखिदैन नि ? अनि के–का लागि नेतृत्वमा आउने त संघको कार्यालयमा एउटा फोटो झुण्ड्याउन मात्र हो ?
हो, तपाइले भनेको कुरा म स्वीकार्छु । मैले त तिलक रानाभाटको कार्यकालमा भएको साधारणसभामा पनि भनेको हँु यदि व्यवसायीको हितमा काम गर्न सकिदैन भने फोटै टास्न मात्र नेतृत्वमा नजाउ भनेर । अनि अर्को कुरा यो संस्थाको पहुँचको कुरा, आर्थिक पाटोको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउछ । तर वर्तमान कार्यसमितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिमलजी अध्यक्ष भएर आएपछि उहाँले के कति सपार्नु भयो त्यो मैले भन्ने भन्दा पनि व्यवसायीले मुल्यांकन गर्ने कुरा हो । तर उहाँ अध्यक्ष भएर आएपछि बिगार्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर वर्षौदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले कहिले न पाएको दुःख यो २ वर्षमा पाएको जस्तो लाग्दैन तपाइलाई ?
हो व्यवसायीले दुःख पाएका छन् त्यो म स्वीकार्छु तर व्यवसायीले संघको कारणले दुःख पाए या सरकारको नीतिका कारण दुःख पाए भनेर पनि मुल्यांकन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा नि सबै दोष जति नेतृत्वलाई दिएर मात्र पनि हुँदैन हामी व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर आफ्नो धरातल नबिर्सी काम गर्नुपर्छ । हिजो फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भए पछि फ्रीमा आउन थालेको मलेसियाको डिमाण्ड आज पैसा तिरेर ल्याऊछन् व्यवसायी साथीहरु । कम्तिमा आफु–आफुबीच प्रतिस्पर्धा गरेर गरिब कामदारलाई मारमा नपारौ भन्ने मेरो धारणा हो । हो, यो व्यवसायमा दुई पैसा कमाउननै सबै आएका हुन् । तर कमाउन आएको भन्दैमा कम्तिमा इमान्दार भएर कमाऊ । हामी पनि यहि समाजमा बस्नुपर्छ यो समाजप्रति मनमा डर राखेर काम गरौ । त्यो भन्दा ठुलो त विदेशिने कामदारलाई हेरेर काम गरौ भन्छु म त ।